LG weputara uzo ohuru nke LG X nke di n'etiti | Gam akporosis
Mbinye aka LG na-aga n'ihu ịkụ nzọ dị n'etiti etiti nke na-adịkarị ka ọ karịrị jupụta mana ka ọ na-agba mbọ ịsọ mpi na mwepụta nke otu oge, ọ nweghị ihe ọzọ na obere ihe, karịa ekwentị ọhụrụ anọ, ndị a bụ ọnụ X Ike, X Style, X Mach na X Max.
Naanị ọnwa ole na ole gara aga, ọnụ ọgụgụ ọhụrụ abụọ dị n'etiti etiti na-amalite na Mobile World Congress na Barcelona. LG, X Cam na X Screen ma ugbu a, ezinụlọ ahụ dị okpukpu anọ.
Dika anyi matara site na nke anyi ukara blog si ụlọ ọrụ South Korea, LG Ọ ka gosipụtara ọhụrụ ekwentị ọhụrụ anọ na, agbanyeghị na etinyere ha n'ime ihe anyị na-akpọkarị "etiti etiti", ọ bụkwa eziokwu na onye ọ bụla n'ime ha nwere otu njirimara ma ọ bụ karịa nke na, n'egbughị oge, anyị nwere ike ịbanye n'ime elu- njedebe njedebe.
N'ọnọdụ ọ bụla, ha bụ ngwaọrụ dị iche iche, ọ dịkwa ka ha na-elekwasịkwa anya na ụdị ndị ọrụ dị iche iche.
Nke mbu anyi nwere LG X Ike Nke a na-apụta nnukwu batrị 4.100 mAh ya, nke kachasị elu na njedebe ndị ọzọ ewepụtara; ma ọkpụrụkpụ ya naanị 7,9 mm na ya "ngwa ngwa ụgwọ" kwụpụta.
Anyị na-aga n'ihu na LG X Egwuregwu: ihuenyo na mkpebi QHD na teknụzụ IPS kwantum, nkwado maka netwọkụ 4 9G LTE nke Atiya na nhazi (nke emebeghi onye nrụpụta ya) na 1,8 GHz, bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ ya pụtara ìhè.
Nke atọ, Xdị LG X, ọnụ nke ejiri nlezianya lekọta imewe ahụ karịa ma nke enweghị nkọwa ọhụụ ekpughere, belụsọ na ọ ga-adị "ezigbo mkpa".
Ndien ke akpatre, lg x kacha nke, dị ka i nwere ike na-ama guessed si aha ya yiri Xiaomi MiMax, nzọ na nnukwu ihuenyo. Ọ bụ phablet zuru oke iji lelee ụdị vidiyo niile mana nke akọwapụtabeghị nkọwa teknụzụ.
N'oge a, anyị amaghị ihe ọ bụla banyere ụzọ anọ anọ a na-akwụ site na LG, mana ha na-ekwupụta na nkwupụta ha na anyị ga-enwerịrị nkọwapụta teknụzụ niile, ụbọchị mmalite na, n'ezie, ọnụahịa dị nso.
Isi mmalite | LG Blog
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » LG weputara uzo ohuru nke LG X n’etiti